Thursday, 12.29.2016, 03:23pm (GMT5.5)
अघिल्लो हप्ता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा विज्ञप्तिको चिर्कटो मिल्काउँदा राजनीतिक दलका नेता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सातो गयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पूर्व राजाले बोल्न समेत नपाउने भन्दै धेरै बोल्न थाले दरबार हत्याकाण्डको फेरि अनुसन्धान गर्ने धम्की दिए । दरबार हत्या काण्डको अनुसन्धान थाल्ने भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यसको दोषी ठहर गरेर कारबाही गर्ने भनिएको हो ? तर, नेपाली जनताले बुझेको कुरा के हो भने दरबार हत्याकाण्ड वर्षौंको ग्राण्ड डिजाइनको उपज थियो । पूर्व राजालाई धम्की दिएर उनले मुलुकको यथार्थ चित्रण गरी केही नबोलुन् भन्ने नेताहरूको चाहना हो । यो घटनाले के देखियो भने नेताहरूले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र सामथ्र्य देखाउन नसकेपछि जनताको आकर्षण पूर्व राजातिर जाला र आफूहरू पुनः शक्तिच्यूत हुनुपर्ला भन्ने त्रास हो ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जब जब देश र जनताको अवस्थालाई चित्रण गरी विज्ञप्ति जारी गर्छन् तव तव राजनीतिक दलका नेताहरू तर्सिन पुग्छन् । यसको कारण भनेको नेपालको गणतन्त्रमा नेपाली सुगन्ध छैन । धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा नेपालीपन छैन । त्यसैले मुलुकबाट राजतन्त्र विस्थापित भएर गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक बितिसक्दा पनि गणतन्त्र स्थायित्वतर्फ गएको छैन ।
पछिल्लो समय मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा परेको भनेर गत बुधबार पूर्व राजा शाहले देशको वर्तमान अवस्थालाई चित्रण गरी राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै सचेत रहनन आव्हान गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि राजनीति–बौद्धिक जगतले बहस गर्ने एउटा मसाला पाए । पूर्व राजाको विज्ञप्तिमाथि टिप्पणीको लहर चल्यो, सामाजिक संजालमार्फत कतिले समर्थन गरे कतिले आलोचना । तर, त्यो वक्तव्यको यथार्थतिर कसैको ध्यान गएन । पूर्व राजाको विज्ञप्ति लगत्तै भारतले नेपाली सेनाको कमाण्ड सम्हाल्ने योजना बनाइरहेको समाचार सार्वजनिक भयो । यो विषयमा कुनै नेताको ध्यान गएन । पूर्व राजाको सच्चाइले जनता आकर्षित होलान् भन्ने त्रस्त मानसिकता प्रदर्शन गर्दै दरवार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्ने धम्की दिन थाले ।
पूर्व राजाको पछिल्लो वक्तव्यले राजतन्त्रप्रति जनताको आस्था अझै नभत्किसकेको दावी गर्दै अहिलेका नेताहरूले देशलाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाएको आरोप समेत लगाए । यो आरोप त्यस्तो समयमा लगाइएको छ जतिबेला संविधान संशोधनका लागि भारतको चर्को दवाव र निर्देशन छ । संविधान संशोधन प्र्रस्तावकै कारण पश्चिमाञ्चलका विभिन्न जिल्ला आन्दोलित छ । संसद अबरुद्ध छ, सडकमा उग्र नारा लागेका छन् ।
यो सब नेताहरूको अकर्मण्यताकै कारण हो । मुलुकको दीर्घकालीन हित सोच्नेहरूले हतारमा निर्णय गर्दैनन् । अहिले त्यस्तै देखिएको छ र यसै मेसोमा पूर्व राजाको विज्ञप्ति आयो, जनतालाई राष्ट्रियताप्रति जागरुक हुने आव्हानका साथ । यो आव्हानले एकथरि राजनीतिक नेताहरू तर्सिन पुगे । यसअघि जस्तै पूर्व राजाको विज्ञप्तिपछि तर्सिने क्रम अझै हटेको रहेछन् ।
एउटा स्मरणीय कुरा के छ भने– पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जनमतको कदर गरें भन्दै नारायणहिटी राजदरबार पत्रकार सम्मेलन गरेर छाडे । उनले श्रीपेच र राजदण्ड नेपाली जनताको नासो भएकाले त्यसको संरक्षणको दायित्व सरकारको भएको बताउँदै हाँसीहाँसी नारायणहिटी छोडेर राजाले दरबार नछाड्ने पो हुन् कि भन्ने त्रास पालिरहेका नेताहरूको ठूलो बोझ हटाइदिएका थिए । आफू जहाँ जसरी बसे पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका पूर्व राजाको भावनाको नेताहरूले कदर गर्न नसकेको पो हो कि ? अहिले अखण्ड नेपालमाथि आक्रमण भैरहेको अनेक चर्चाकाबीच पूर्व राजाको विज्ञप्ति आउँदा नेताहरू किन तर्सिए ? यो अहम् सवालको जवाफ कसले दिने ?
के पूर्व राजाले राजतन्त्र फर्काउन सक्छन् ? त्यसको आधार तयार गर्न उनी सक्षम छन् ? पक्कै पनि यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । तर, पूर्व राजाको संकेत नेताहरू सुध्रिउन भन्ने हो भनेर सकारात्मक रुपमा लिने हो भने यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेताहरूले अहिले जसरी मनपरी निर्णय गर्ने गरेका छन्, त्यसमा सुधार ल्याउने हो र देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने हो भने न पूर्व राजाको विज्ञप्ति नै आउँछ, न त नेताहरू नै तर्सनुपर्नेछ ।
आफूले राम्रो गर्न नसक्दा अरुले नराम्रो औंल्याइंदिंदा सोही व्यक्तिमाथि खनिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म कसैको पनि हित हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले स्वयं नेतासंगै देश पनि दुर्भाग्यको खाडलमा जाकिनेछ । अहिले मुलुकको व्यवस्थामा संकट पूर्व राजा वा उनको समर्थक रहेका समूहबाट हैन कि गणतन्त्रका अभियन्ताहरूकै व्यवहारबाट भैरहेको छ । जनताका असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने जोसुकैले खेल्ने मौका पाउनेछ । जनताको भावनाको कदर हुन नसकेको र नेताहरूप्रति आक्रोश बढिरहेका बेला आएको पूर्व राजाको विज्ञप्तिले नेताहरूको त्रस्त मानसिकता नै प्रकट भएको हो कि साँच्चै प्रतिक्रान्तिको संकेत हो ? यो अर्कै विश्लेषणको विषय छ ।
हुन पनि पूर्व राजाको वक्तव्यलाई केही नेताहरूले प्रतिक्रान्तिको संकेत हो भने, तर त्यसमाथि अधिकांश सर्वसाधारणको टिप्पणी भने साकारात्मक थियो । पूर्व राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा देशको विग्रदो स्थितिप्रति चिन्ता जनाउँदै सचेत रहन आव्हान गर्नु सामान्य कुरा हो । तर, यही सामान्य कुराले सरकारको सातो जानु भने असामान्य हो ।